सरकार डा केसीको माग पुरा गर नत्र पछुताउनु पर्ला – Online National Network
— रवी थापा १३ आश्विन २०७७, मंगलवार १५:११
त कुनै लोभ, न त कुनै लालच मात्र देशको हितको लागि आफ्नो जीवन समर्पण गरेका डा गोविन्द केसी अहिले १९ अौ सत्यग्रहमा छन् ।आज अनसन बसेको पनि १६ दिन पुग्यो ।
देशभर जतासुकै डाक्टरको अनसनलाई साथ दिने युवाहरू सडकमा ओर्लिएका छन् । डा केसी हामी नेपालीको हितका लागि आफ्नो ज्यान दाउमा राखेका छन् । तर यो नालायक दुई तिहाइ सरकारले १८ अौ पटकसम्म डाक्टर केसीलाई धोका दियो । कति झुट्टको खेती गरेको सरकार, आखिर केसीको माग के पो छ र?
आफू लगायत आफ्ना पुस्ताले शिक्षा, स्वास्थ्यमा फ्रिमा लाभ लिन सकेनन् र अब आउने पुस्ताको हालत यस्तै नहोस् भनेर तपाईंका पुस्ता र हाम्रा पुस्ताका लागि यति लामो समयसम्म अनसन बसेका हुन्। के यो गल्त कुराको माग हो र सरकार ? एउटा बुढा ब्यक्ति आज १६ अौ दिनसम्म कुनै पनि भोजन सेवन नगरी एउटा बेडमा थला परिरहेका छन्।
तिमीहरूलाई लाई अलिकति भए नि दया लागेन महासयहरू । यत्रो दिनसम्म एकपटक कुनै मन्त्रीहरू केसीलाई भेट्न गएको रेकर्ड छ।आफ्नो पद धरापमा पर्दा मन्त्रीहरूको घरघरमा राति १२ बजे उठेर जान सक्नेहरूले एक पटक ति बुढा बा अनसन बसेको ठाउँमा गएर तपाईंले अनसन तोड्नुहोस् हामी पूरा गर्छौ तपाईंको माग भन्न गएको रेकर्ड छ ।
आखिर यो सरकारले केका लागि हो ? जनताको आवाज कहिले सुन्ने हो ? यत्रो समय भयो न त उज्यालोका नायक कुलमान घिसिङलाई पुन नियुक्ति दिन छन् । न त डा केसीको मागलाई नै सम्बोधन गर्छन्। हरेक पटक जनता सडकमा ओर्लिनु पर्छ एक सामान्य कुराको लागि पनि सरकार!
कहिलेसम्म यो फोहोर राजनीतिमा लिप्त भएर बस्ने हो सरकार । सुनेको थिए यो सरकार जनताको सरकार हो भनेर तर होइन्छ मेरो सुनाइमा फरक परेछ यो सरकार त भ्रष्टाचारी, लुटेरा, देशद्रोहीलाई साथ दिने सरकार रहेछ ।
यहाँ त आफ्नो मान्छेलाई पद दिलाउने सरकार रहेछ,यहाँ त मन्त्री हरू रिसाउछन् किभनेर उनीहरूको चाहाना अनुसार काम गर्ने रहेछ। कहाँ जनताको कुरा सुन्ने सरकार रहेछ त!
हे महासयहरू अब यो हुकुम नचालाउनु होस् तपाईंहरूले, छिटोभन्दा छिटो गोविन्द केसीको मागलाई छिटो भन्दा छोटो सम्बन्ध गरियोस्, नत्र पछुताउनु पर्ला, चेतना भय सरकार !